12ka Masters ee ugu sarreeya Injineerka Tamarta Dib loo Cusboonaysiin karo 2022
12 Masters sare ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo
Masters-ka ee injineernimada tamarta la cusbooneysiin karo waxaa wax ka barta jaamacadaha adduunka ugu sarreeya ee lagu bixiyo khadadka khadka tooska ah iyo khadka tooska ah ee loogu talagalay ardayda inay doortaan xulashada daraasadda ee iyaga ku habboon.
Daraasadda masters-ka waxay caadi ahaan qaadataa hal illaa saddex sano si loogu dhammaystiro barnaamijyada sida injineernimada oo qaadata illaa saddex sano. Injineeriyadu waxay kuxirantahay noocyo kala duwan oo cilmiyaysan, waxay ka goysaa daawada oo ah farsamada bayoolajiyada iyo teknolojiyada biomedical, injineernimada kombiyuutarka, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, iyo wixii la mid ah
Boostadani waxay diirada saareysaa masters-ka injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo, nooc injineernimo ah oo aan weli caan aheyn, mustaqbalkana dadka xirfadan leh ayaa loo baahan doonaa. Haddii aad dhammaystirtay shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee injineernimada oo aad rabto inaad sahamiso qaybaha kale ee injineernimada, waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo.
Waa maxay tamarta dib loo cusboonaysiin karo?
Maxaan ku samayn karaa sayidkayga tamarta la cusboonaysiin karo?
Waddankee ayaa ugu fiican MS xagga injineernimada dib loo cusboonaysiin karo?
Waa maxay celceliska mushaarka injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo?
Masters sare ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo
Masters ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee jaamacada Aberdeen
Masters-ka ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee jaamacada Cranfield
Masters-ka ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee jaamacada Coventry
Masters-ka ee Tamarta Cusboonaysiinta iyo Teknolojiyada Nadaafadda ee Jaamacadda Manchester
Masters-ka ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee jaamacada Kingston
Master of Science ee Horumarinta Tamarta Waarta ee Jaamacadda Calgary
Masters ee injineernimada tamarta waarta ee Jaamacadda Carleton
Masters-ka ee injineernimada Nidaamka Tamarta Cusboonaysiinta ee Jaamacadda Surrey
Master of Engineering Leadership ee injineernimada nadiifinta tamarta ee Jaamacadda British Columbia
Masters-ka ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee jaamacada Central Lancashire
Masters-ka ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee machadka farsamada ee Oregon
Masters ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee Jaamacadda Exeter
Masters-ka ee injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee jaamacada Heriot-Watt
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waa tamar waxtar leh oo laga soo ururiyay ilaha dib loo cusboonaysiin karo, oo si dabiici ah loogu buuxiyay jaangooyooyinka dadka, oo ay ku jiraan ilaha kaarboon-dhexdhexaadka ah sida qorraxda, dabaysha, roobka, hirarka, hirarka, iyo kuleylka kululaynta _ Wikipedia
Faa'iidada tan ayaa ah inay ku dhaliso tamar qiiqa eber-ka ee waxyeelada u leh deegaanka sidoo kale waxay ka caawisaa yareynta wasakheynta hawada. Tusaalooyinka tamarta la cusboonaysiin karo waa:
Hydro-Electric eg biyo xireenno
Tamarta dabaysha tusaale ahaan birta dabaysha
Gaas gaas dabiici ah.
Tamarta la cusboonaysiin karo ayaa muhiim u ah bini-aadamka oo haddii aan dhab ahaantii dooneyno inaan dhulka ka dhigno jawi aan wasakh lahayn, waa inaan la tagnaa tamarta la cusboonaysiin karo waqti buuxa. Wershado badan ayaa durba la aasaasay oo soo saara wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo sida baalayaasha cadceedda iyo mashiinnada dabaysha laga dhaliyo.
Shirkadahaani waxay horey u arkeen in dhulku inuu sii noolaado dhamaanteen waa inaan wadadaas u marnaa oo alaabooyin dheeri ah oo isticmaalaya il gaar ah oo tamar ah ayaa wali la soo saarayaa. Mustaqbalka fog-fog, tani waxay noqon laheyd wax caadi ah, oo caadi ah.
Muhiimadda ay u leedahay deegaanka iyo bini-aadamka waa mid ka mid ah sababaha badan ee loo soo bandhigo iyada oo ah barnaamij daraasad oo laga qaado jaamacadaha qaarkood si loo soo saaro shaqsiyaad badan si ay u sii horumariyaan goobta. Qalin jabiyayaashan waxaa loo yaqaan injineerada tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Injineerada tamarta la cusboonaysiin karo waa shakhsiyaadka adeegsada mabaadi'da xisaabta iyo sayniska si ay u qabtaan hawlo kala duwan oo ku saabsan warshadaha tamarta la cusboonaysiin karo sida naqshadeynta baalayaasha qoraxda, marawaxadaha dabaysha, dhirta dhulka hoostiisa ku jirta, iwm
Ardayda ka qalin jabisa masters-ka injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo waxay u furan yihiin fursado badan oo mihnadeed kuwaas oo ay ku jiraan boosaska maaraynta warshadaha tamarta iyo hawlgallada, qaabeynta nidaamka tamarta iyo rakibidda, iyo jagooyinka dowladda.
Sidoo kale, helitaanka shahaadadan ayaa ah jaranjaro loogu talagalay ardayda qalin jabisa ee doonaya inay u gudbaan daraasadaha dhakhaatiirta. Qaadashada shahaadadan waxay buuxisay mid ka mid ah shuruudaha muhiimka ah ee loogu talagalay barashada takhasuska.
Xirfadaha ugu sarreeya tamarta la cusboonaysiin karo waa:
La taliyaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Maareeyaha goobta beeraha dabaysha
Maareeyaha mashruuca qoraxda
Maamulaha dhismaha cagaaran
Wakiilka iibinta tamarta la cusboonaysiin karo
Injineerka tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Dhismaha iyo naqshada
Wadamada ugu sareeya ee lagu barto masters-ka ee injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo waa:
Caadi ahaan, celceliska mushaarka injineerka tamarta dib loo cusboonaysiin karo wuxuu udhaxeeyaa inta udhaxeysa $ 74,600 iyo $ 86,000 qiyaastii. In kasta oo kala duwanaanta mushaharkani ay ku kala duwan yihiin waddamada kale ee aad uga sarreeya ama ka hooseeya.
Si loo ballaariyo aqoontaada tamarta dib loo cusboonaysiin karo loona helo xirfado wax ku ool ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iska qorto barnaamijka shahaadada mastarka si aad u hesho khibrad sare.
Maqaalkani, waxaan diyaarinay liis ay ku qoran yihiin faahfaahinta masters-ka ee injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo oo ay bixiyaan jaamacadaha adduunka ugu sarreeya iyada oo aan la sii fahmin, aan aragno hay'adahan.
Hoos waxaa ku yaal masters-ka ugu sarreeya injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo:
Jaamacadda Aberdeen waxay ku taal Boqortooyada Ingiriiska waxayna bixisaa masters-waqti-buuxa iyo waqti-dhiman ah 'injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Barnaamijka waqtiga-buuxa waxaa kaliya lagu heli karaa iyada oo loo marayo barashada xerada iyo sidoo kale barnaamijka waqtiga-dhiman laakiin kaliya waqtiga-dhiman ayaa loo heli karaa ikhtiyaarka daraasadda internetka.
Xulashada waqtiga-buuxa waxay qaadataa 12 bilood in la dhammaystiro halka waqtiga dhiman uu u baahan yahay 27-30 bilood in la dhammaystiro. Khidmadaha khadka tooska ah ama barnaamijka waqtiga-dhiman waa, 12,180 iyo waqtiga buuxa, khidmadaha waa ,23,500 9,200 ee ardayda EU / caalamiga ah iyo £ XNUMX ee ardayda gudaha.
Si loogu tixgeliyo gelitaanka masters-ka ee injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Jaamacadda Aberdeen, codsadayaashu waa inay dhammaystiraan barnaamijka shahaadada koowaad ee bachelor-ka ee qayb kasta oo injineernimada, fiisikiska, xisaabta, ama kiimikada leh fasalka labaad ee sare (2: 1). Ardayda leh fasalka labaad ee hoose (2: 2) iyo in ka badan laba sano oo khibrad shaqo ah ayaa sidoo kale loo tixgelin karaa gelitaan.
Qeybta tamarta la cusbooneysiin karo si dhakhso leh ayey u kordheysaa maaddaama aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka barato berrinka, halkan Jaamacadda Cranfield waxaa laguu qalabeyn doonaa aqoon xirfadeed iyo xirfado looga baahan yahay inaad ku horumariso xirfad ku guuleysata warshadaha.
Ardaydu waxay sameyn doonaan cilmi baaris waxayna kasbanayaan xirfado gacan-ka-siin ah oo siin doona iyaga ballaarin ballaaran oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo, ku dhiirrigeliya iyaga inay naqshadeeyaan oo dhisaan nidaamkooda tamarta la cusboonaysiin karo iyo inay gacan ka geystaan ​​sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada dhulka iyo kor u qaadida warshadaha sidoo kale
Barnaamijku wuxuu leeyahay ikhtiyaarro waxbarasho oo waqti-buuxa ah iyo waqti-dhiman ah, kii hore wuxuu qaadanayaa hal sano in la dhammaystiro halka kan dambe u baahan yahay laba illaa saddex sano. Waa inaad dhammaystirtay oo aad kasbatay shahaadada sharafta ee injineernimada, xisaabta, ama sayniska.
Jaamacadda Coventry waxay ku taal Boqortooyada Midowday waxayna bixisaa sayidyo injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo oo keliya xulashada daraasad waqti-buuxa ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah, Boqortooyada Midowday, iyo EU-da. Ardayda caalamiga ah waxay bixiyaan £ 17,000 khidmadaha, ardayda UK waxay bixiyaan £ 10,000, iyo ardayda EU waxay bixiyaan, 17,900.
Masters-ka barnaamijka injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo ee jaamacada Coventry waxay ku hoos jirtaa kuliyada injineernimada, deegaanka, iyo xisaabinta. Barnaamijka waxaa loogu talagalay ardayda ay daneynayaan waxbarashadooda iyo xirfadooda shaqo ee warshadaha tamarta la cusbooneysiin karo, maadaama ay ku qalabeyn doonto xirfado sare iyo fursad ay ku xoojiyaan aqoontooda injineernimada iyo horumarinta aqoon cusub.
Tani sidoo kale waxay la mid tahay masters-ka injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo marka laga reebo waqtigan jaamacadani waxay go'aansatay inay magacawdo wixii aad kor ku aragtay. Barnaamijku wuxuu u baahan yahay 12 bilood oo daraasad waqti-buuxa ah si loo dhammaystiro loona kasbado MSc.
Si aad ugu kasbato barnaamijkan, waa inaad dhammaystirtay oo aad kasbatay shahaado sharaf sharaf labaad oo ah injineernimada korantada iyo korantada, injineernimada farsamada, injineernimada, fiisikiska, ama u dhigma oo ay tahay inuu daboolo xisaabta iyo injineernimada.
Khidmadaha lagu barto masters-ka ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo tikniyoolajiyadda nadiifka ah ee Jaamacadda Manchester ee loogu talagalay ardayda UK waa £ 11,500 iyo ,26,500 XNUMX ardayda caalamiga ah iyo kuwa EU.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay diiradda injineernimada wuxuuna la macaamilaa codsiyada, oo lagu daro qaybta ganacsiga ee khuseysa ururada waaweyn ama shirkadaha dhexdhexaadka ah. Ardayda waxaa lagu sii horumarin doonaa khibrad wax ku ool ah si ay u awoodaan inay naqshadeeyaan nidaamyada tamarta la cusboonaysiin karo si ay uga faa'iideystaan ​​deegaanka.
Barnaamijku wuxuu qaadanayaa 1 iyo 2 sano oo xulashooyin waxbarasho oo waqti-buuxa ah iyo nus-waqti ah si loo dhammaystiro. Khidmadaha ardayga waqtiga-buuxa ee gudaha ah waa, 9,430 iyo, 5,187 waqti-dhiman. Khidmadaha ardayga caalamiga ah ee buuxa waa £ 14,900 iyo, 8,195 waqti-dhiman.
Masters-ka injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Jaamacadda Kingston waxay ku faantaa xarumo goos goos ah oo loogu talagalay in lagu qalabeeyo ardayda xirfado wax ku ool ah iyo helitaanka aqoonta looga baahan yahay inay ku guuleystaan ​​berrinka.
Shahaadada mastarkaani waa barnaamij qalin jabin ah oo bixiya waxbarasho isku dheelitiran oo la xiriirta tamarta iyo maareynta deegaanka. Ardaydu waxay kaqeyb qaadan doonaan siminaaro, aqoon isweydaarsiyo, iyo safarada dibada si kor loogu qaado xirfadahooda iyo aqoontooda si ay u noqdaan injineero xirfadlayaal deegaanka ah.
Waqtiga loo baahan yahay waa 16 bilood oo daraasad waqti-buuxa ah iyo lix sano ugu badnaan, si loogu qalmo gelitaanka, ardaydu waa inay dhammaystiraan barnaamij shahaadada afarta sano ah oo ka socda hay'ad la aqoonsan yahay oo uguyaraan 3.0 GPA miisaanka 4.0.
Barnaamijkan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa masters-ka injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo wuxuuna ardayda u diyaarinayaa shaqo la xiriirta tamarta waarta ee dowladda, ganacsiga, ama waaxda madaniga ah iyo inay u adeegto sidii waxbarasho dheeraad ah heerka dhakhaatiirta.
Barnaamijku wuxuu hirgaliyaa hanaan u gaar ah oo anshax marin ah oo ku lug leh injineernimada iyo siyaasada guud si loogu qalabeeyo ardayda xirfadaha iyo aqoonta looga baahan yahay inay ku guuleystaan ​​warshadaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee si dhakhso leh u koraya.
Jaamacadda Surrey waxay ku taal Boqortooyada Midowday waxayna bixisaa masters-ka injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyada oo loo marayo xulashooyin waxbarasho oo waqti-buuxa ah iyo waqti-dhiman ah oo u baahan 1 iyo 2 sano siday u kala horreeyaan. Inta lagu guda jiro daraasaddaada, ardaydu waxay fursad u heli doonaan inay wax ka bartaan teknoolojiyadaha tamarta la cusbooneysiin karo, dhaqaalaha waaxda tamarta, maareynta silsiladaha, iyo horumar waara.
Shuruudaha gelitaanka waxaa ka mid ah heerka labaad ee heerka koowaad ee la aqoonsan yahay ee shahaadada koowaad ee maadada kiimikada, fiisigiska, ama injineernimada UK ama jaamacadda la aqoonsan yahay. Ardayda waqtiga buuxa ee UK waxay bixiyaan khidmadda waxbarashada ee, 10,600 iyo, 22,400 ardayda caalamiga ah.
Codsadayaasha waqti-dhiman ee UK waxay bixiyaan khidmadda waxbarashada £ 5,300 iyo, 11,200 ardayda caalamiga ah.
Tamarta nadiifka ah sidoo kale waa tamar dib loo cusboonaysiin karo, sidaa darteed ha u oggolaan magaca halkan inuu ku wareeriyo sidoo kale wuxuu la mid yahay sayidyada injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo. Waa barnaamij soconaya 12 bilood oo loogu talagalay in lagu balaadhiyo aqoontaada nidaamka tamarta waara, keydinta tamarta, shabakadaha qeybinta tamarta, waxtarka tamarta, iyo siyaasada tamarta.
Kharashka waxbarashada waa $ 29,810 ee ardayda gudaha iyo $ 54,367 ee ardayda caalamiga ah, ma jiro daraasad waqti-dhiman ah oo keliya xulasho daraasad waqti-buuxa ah oo loo heli karo koorsadan.
Jaamacadda Lancashire, oo ku taal Boqortooyada Midowday, waxay bixisaa masters-ka injineernimada tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee fursadaha waxbarasho ee waqtiga-buuxa iyo waqtiga-dhiman ah ee lagu barto Preston Campus. Barnaamijku wuxuu ku qalabeyn doonaa kaqeybgalayaasha aqoonta injineernimada iyo xirfadaha wax ku oolka ah ee looga baahan yahay horumarinta iyo hirgelinta xalalka hal-abuurka ah ee dhibaatooyinka injineernimada ee wajahaya tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Codsadeyaashu waa inay qalinjabiyeen oo kasbadeen shahaadada koowaad ee injineernimada ama teknolojiyada uguyaraan heerka labaad ee hoose (2: 2). Ardayda caalamiga ah ee leh 2: 2 waa inay lahaadaan xisaabta iyo khibrad shaqo.
Kharashka ardayda waqtiga-buuxa ee UK waa £ 7,100 sanadkii iyo £ 785 halkii 20 ee dhibcaha ardayda waqti-dhiman ah halka Midowga Yurub iyo ardayda waqtiga-buuxa ee caalamiga ah ay bixiyaan ,14,500 785 sanadkii iyo £ 20 XNUMX dhibcaha ardayda waqti-dhiman.
Master-ka ee injineernimada tamarta dib loo cusbooneysiin karo ee Machadka Teknolojiyadda ee Oregon waxaa loogu talagalay in lagu habeeyo ardayda waqtiga buuxa iyo xirfadleyda shaqeeya. Barnaamijku wuxuu ardayda u diyaarinayaa inay noqdaan qalinjabiyeyaal xirfadlayaal ka ah cilmiga injineernimada tamarta aqoon sare iyo xirfado si ay ugu oggolaadaan inay ka qabtaan dhammaan jagooyinka shaqo ee ka jira dhammaan qaybaha loo soo bandhigayo.
Si loogu oggolaado barnaamijkan Oregon, codsadayaashu waa inay dhammaystiraan oo ay kasbadaan shahaadada jaamacadeed ee injineernimada, fiisigiska, ama anshax farsamo ee la xidhiidha GPA of 3.0 oo ah miisaanka 4.0
Jaamacadda Exeter waxay siisaa masters-ka injineernimada dib loo cusbooneysiin karo ardayda doonaya inay sahamiyaan warshadaha tamarta la cusbooneysiin karo isla markaana ay xirfad ka helaan. Isqorista barnaamijkan waxay ardayda ku qalabeyn doontaa gacan-qabasho iyo aqoon aragtiyeed oo lagama maarmaan u ah inay ku guuleystaan ​​berrinka.
Muddada barnaamijka waa hal sano oo daraasado waqti-buuxa ah waxaana loo baahan yahay in codsadayaashu ay dhammaystiraan barnaamijka shahaadada bachelorka ee GPA ee 2.2 miisaanka 4.0 oo ay ku aflaxaan shuruudaha luuqadda Ingiriisiga.
Kharashka waxbarashada ee ardayda caalamiga ah waa £ 23,450 iyo, 10,950 ardayda gudaha.
Jaamacadda Heriot-Watt, oo fadhigeedu yahay Boqortooyada Midowday (UK), waxay ardayda iyo ardayda dal iyo dibadba siisaa fursad ay ku bartaan sayidyada injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo isla markaana ay ku helaan xirfado wax ku ool ah iyo aqoon ku saabsan koritaanka degdegga ah.
Koorsadu waxay horumarin doontaa fahamka muhiimka ah ee ardayda ee isbeddelada muhiimka ah ee ka socda warshadaha nidaamka tamarta sababtoo ah horumarinta iyo is-dhexgalka dabaysha, badda, biomass, iyo teknolojiyada qoraxda.
Kharashka waxbarashada ee ardayga gudaha ee buuxa waa £ 7,552 iyo £ 3,776 waqti-dhiman halka khidmadda waxbarashada ee ardayda caalamiga ahi ay tahay is 20,200 oo waqti buuxa ah iyo, 10,100 oo waqti dhiman ah.
Kuwani waa kuwa ugu sarreeya ee 12 ee ku takhasusay injineernimada tamarta la cusbooneysiin karo iyo in badan oo ka mid ah barnaamijyadan waxaa laga bixiyaa Boqortooyada Midowday maxaa yeelay waxay caan ku yihiin qaybtaas adduunka.
Barnaamijyadan waxaa loogu talagalay inay aqoontaada injineernimada iyo xirfadahaaga u qaadaan heer sare oo ay kugu qalabeeyaan aqoon aan caan ahayn, taas oo ah, aqoonta injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo. Iyada oo leh xirfad si buuxda u horumarsan barnaamijkan, waxaad bilaabi kartaa shaqo bilow ah warshadaha tamarta la cusboonaysiin karo.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad horeyba uga mid ahayd shirkad bixisa alaab iyo adeegyo tamarta la cusboonaysiin karo waxaad sidoo kale iska qori kartaa mid ka mid ah barnaamijyadan si aad u hesho aqoon xirfadeed oo aad ku kasbato dallacsiinta goobtaada shaqada.
5 Dugsiyada injineernimada ugufiican Kanada ee leh deeqaha waxbarasho
15 Dugsiyada Injineerinka Shahaadada Sare ee Dunida Ugu Fiican
12 Koorsooyin injineernimada codka oo bilaash ah oo wata shahaadooyin
Koorsooyinka injineernimada jireed ee ugu sareeya 10
Koorsooyinka 5-ta Naqshadood ee ugu Muhiimsan injineernimada farsamada
5 Dugsiyada Injineerinka ugu Fiican Kaliforniya oo leh Deeqo waxbarasho
masters of injineernimada tamarta la cusboonaysiin karo
Previous Post:Shuruudaha Jaamacadda Saskatchewan | Khidmadaha, Barnaamijyada, Deeqaha waxbarasho, Qiimeynta
Post Next:Iskuulada ugu Fiican Dugsiyada Injineeriyada Dunida
Pingback: 10 Dugsiyada Kalkaalinta Sare ee Filibiin